लकडाउनमा कडाइ - News25 Daily
June 20, 2020 adminLeaveaComment on लकडाउनमा कडाइ
काठमाडौं : सरकारले कोरोना संक्रमण (कोभिड-१९) संक्रमणको जोखिम मुल्यांकन गर्दै लकडाउनलाई कडाइ गरेको छ। गृह मन्त्रालयले ‘बन्दाबन्दी व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड, २०७७’ जारी गर्दै लकडाउन पालना गर्न सुरक्षा निकाय, उद्योगी, व्यवसायी, सेवाग्राही, मजदुर लगायतलाई निर्देशन दिएको छ।
मापदण्ड अनुसार अब अत्यावश्यक कामबाहेक राति १०देखि बिहान ५ बजेसम्म हिँडडुल गर्न पाईने छैन। लकडाउन खुकुलो पार्दा रातको समयमा सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर एकबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम अझ बढ्ने ठहर गर्दै गृहले नयाँ मापदण्ड अघि सारेको हो। मालसामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा चालक र सहचालकबाहेक अरु चढ्न नपाउने नियम लागू गरिएको गृहले जनाएको छ।
आवतजावत गर्दा र कार्यालयमा रहँदासमेत दुई मिटरको दुरी कायम गर्न मन्त्रालयले सुझाएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार विवाह, मृत्यु संस्कार, चाडपर्व, पुजापाठ लगायतका सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दुई मिटर दुरी काय गर्नुपर्ने र बढीमा १५ जना मात्रै भेला हुन पाउने छन्। उत्पादन मुलक क्रियाकलाप, उद्योग कलकारखाना, भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्दा एक स्थानबाट एक पटकमा १० जना भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ।
उक्त नियमबारे व्यवस्थापन, निर्माणकर्ता, उद्योगी, व्यवसायीले ख्याल गर्नुपर्ने र कामदारले अनावश्यक भीडभाड नगर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। जेष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, सुत्केरी, गर्भवती र १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका र अशक्तलाई अत्यावश्यक तथा स्वास्थ्य प्रयोजनबाहेक परिवारले आफ्नै घरमा बस्न प्रोत्साहन गर्नसमेत गृहले सुझाएको छ।
गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेका अनुसार संक्रमण थप फैलन नदिन होल्डिङ सेन्टर, आईसोलेसन कक्ष, सेल्फ आईसोलेसन, क्वारेन्टाइन कक्ष (होम क्वारेन्टाइन र अन्य क्वारेन्टाइन) र सघन उपचार कक्षमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ। नागरिक सचेत भए कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरणमा थप टेवा पुग्ने उनले बताए। न्यौपानेले भने,‘मन्त्रालयले धेरै सोचेरै यो मापदण्ड तय गरेको हो। जसले मापदण्ड उल्लंघन गर्छ उसलाई कारबाही हुन्छ।’ मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलार्ई अत्यावश्यक सेवा ऐन, २०१४, संक्रामक रोग ऐन, २०२०, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए।
सिडियोले के गर्ने ? प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चार वटा मुख्य कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ। सिडियोले कोरोना संक्रमण र जोखिमको परिस्थिति मूल्यांकनका आधारमा आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको स्थानमा ‘संक्रमित क्षेत्र’ दायरा यकिन गर्न सक्ने छन्। संक्रमित क्षेत्र घोषणा गरिएको स्थानमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कुनै पनि क्रियाकलापमा रोक लागउनुपर्ने छ। कन्ट्याक ट्रेसिङ लगायतको व्यवस्था मिलाउन गृहले निर्देशन दिएको छ। संक्रमित क्षेत्रबाहिर परिस्थितिको मूल्यांकन गरि मध्यवर्ती क्षेत्रको पहिचान गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
सेवा प्रदायकले के गर्ने ? – कर्मचारीको चापलाई ध्यानमा राखेर दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने। – कार्यालय प्रवेश विन्दुमा अनिवार्य ज्वरो नाप्ने थर्मल गन र सरसफाईका लागि स्यानिटाइजर वा सावुन पानीले हात धुने व्यवस्था मिलाउने।
– काम गर्दा अनिवार्य माक्स लगाउने र दुई मिटरको दुरी कायम गरी समय समयमा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। – संभव भएसम्म अनलाईनबाट सेवा प्रवाह गर्ने र भेट गर्नै परे भौतिक दुरी कायम गर्ने। – शुल्क वा राजश्व नगदमा कारोबार नगरी अनिवार्य बैंकमा भौचर पेश गर्न लगाउने। – कार्यक्षेत्र ठूलो भएमा जिल्ला भित्रका गाउँ वा नगरपालिका स्तरिय तालिका बनाएर निश्चित दिन तोकेर सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्ने।
– सेवाग्राहीले पालना गनुपर्ने नियमका बारेमा सबैले देख्ने गरी सूचना वा बोर्ड टाँस्ने। सेवाग्राहीले के गर्ने ? – भीडभाड नगरी सम्बन्धित व्यक्ति मात्रै कार्यालयमा सेवा लिन जाने। – अनिवार्य माक्सको प्रयोग गर्ने। – दुई मिटरको भौतिक दुरी कायम गर्ने। सेवा प्रवाहबारे केही बुझ्नु परेमा फोनबाट बुझ्न र आवश्यक कागजात पुरा गरी कार्यालयको सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्ने। कार्य सम्पन्न भएपछि कार्यालयबाट निस्कने।- स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक परेमा सिफारिस लिएर मात्रै सेवा लिन जाने।
बझाङको मल्लेसीमा पहिरो